Dagaal culus oo ka dhacay furimaha dagaalka & Tiriada dhimashada oo maraysa…. – Puntlandtimes
Dagaal culus oo ka dhacay furimaha dagaalka & Tiriada dhimashada oo maraysa….
September 24, 2018 Puntland PL
GAROOWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aanu helayno ayaa sheegaya in dagaal yahano ka tirsan ururka Al-shabaab ay xalay fiidkii weerar ku qaadeen fadhiisimo ciidamada dowladdu ku leeyihiin degmada Qoryooley ee gobolka Shabellaha Hoose.
Dagaalkaan u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo Shabaab ayaa waxa uu socday ku dhawaad muddo hal saac ah, kaasi oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan.
Ciidamada dowladda federaalka oo helay gurmad dheeraad ah ayaa waxaa u suuragashay in ay iska caabiyeen Shabaabkii weerarka soo qaaday sida ay inoo sheegeen masuuliyiin ka tirsan gobolka Shabellaha Hoose.
Weerarkan ayaa khasaaraha rayidka ka soo gaaray wuxuu yahay hal qof oo dhimasho ah iyo qof kale oo dhaawac ah, inkastoo aanan la xaqiijin karin khasaaraha dhinacyada dagaalamay.
Guddoomiyaha gobolka Shabellaha Hoose oo ku sugan degmada Qoryooley ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay dagaalkan khasaaraha kasoo gaadhay inuu yahay mid kooban isla markaasna kaliya ay kaga dhaawacmeen laba askari.